Nvidia sy Valve dia mitondra DLSS, teknolojia ahafahan'ny Gamers mahazo fampisehoana bebe kokoa amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 11/06/2021 08:42 | Nohavaozina amin'ny 11/06/2021 20:30 | About us
Nandritra ny Computex 2021, Nvidia dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'i Valve hanomezana fanohanana DLSS (Deep Learning Super Sampling) misy ao amin'ny karatra RTX.
DLSS, na Deep Learning Super Sampling, dia teknolojia ahafahanao mahazo fampisehoana bebe kokoa nefa tsy mila mahafoy ny kalitaon'ny sary be loatra. Mba hanaovana izany, ny lalao dia mihazakazaka amin'ny vahaolana ambany kokoa noho ny vahaolana teratany ary avy eo navadika ho famaha teratany mampiasa ny algorithma ny sary.
Ny fanambarana ny fanohanan'ny Valve hanohana ny haitao DLSS dia vaovao tsara, satria ny DLSS dia afaka manatsara fatratra ny taham-bidy nefa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny sary.
“Ny DLSS dia mampiasa ny fandikana AI mandroso mba hamokarana ny kalitaon'ny sary azo ampitahaina amin'ny famahana ny zanatany ary indraindray aza tsara kokoa aza, raha ny fandikana mahazatra ny ampahany amin'ny piksel. Ny teknikan'ny fanehoan-kevitra mandroso amin'ny fotoana fohy dia manome antsipirian'ny sary maranitra sy fanatsarana ny fitomboan'ny frame-to-frame ”, hoy ny NVIDIA.
Ny fiantraikan'ny DLSS dia mety hahagaga amin'ny lalao manohana an'ity haitao ity. Amin'ny tranga sasany, mihoatra ny avo roa heny ny tahan'ny fefy tsy misy DLSS, mazàna tsy misy fiatraikany amin'ny sary. Ny fahalianan'ity teknolojia ity dia miankina amin'ny fianarana lalina.
Ny tambajotran-tsofina voaofana dia tsara kokoa amin'ny famaritana ny ampahany amin'ny sary izay misy ifandraisany kokoa amin'ny fahitan'ny olombelona noho ny algorithma lojika klasika taloha ary mandeha tsara kokoa aza raha ny famerenana ny famoahana ny famoahana raster ho zavatra andrasan'ny mason'ny olombelona ho hita.
Indrisy anefa, Nvidia DLSS dia fananana ary mila fitaovana manokana amin'ny karatra Nvidia vaovao (Andiany RTX 2000 sy ambony), ho fanampin'ny zava-misy izay mbola tsy navoakan'i Nvidia io endri-javatra io amin'ny mpamily Linux teratany izay manana ihany koa.
Raha ny filazan'ny mpandinika sasany dia mahaliana ity teknolojia ity satria voalaza fa mieritreritra ny hanao fitaovana filalaovana tanana i Valve.
Niady hevitra izahay fa ny DLSS dia afaka mamela ny manaraka-gen Switch hiasa tsara mihoatra ny kilasy lanjan'izy ireo, ary izany koa no hitranga amin'ny solosaina finday tsy misy tanjaka maherin'ny taonina, izay mety hitarika Linux.
Ao amin'ny Windows, DLSS dia iray amin'ireo fiasa Nvidia marobe izay mahatonga ny fifindrana amin'ny karatra sary Radeon ho sarotra dinihina, na dia mety aza ny vidiny ary matanjaka ny karatra. Ao amin'ny Linux, mivadika ny andraikitra ary sarotra kokoa ny misafidy an'i Nvidia.
Nanokatra ny mpamily Radeon ho an'ny Linux ny AMD tamin'ny 2015, nanararaotra modely kernel AMDGPU loharanom-baovao malalaka sy misokatra izay nanatsara ny kalitaon'ny mpamily, nahatonga ny sary an-tsary Radeon ho safidy GPU tsara indrindra amin'ny Linux.
Ho an'ny sasany, na dia mifanaraka amin'ny lalao rehetra aza ny DLSS, "fa tsy 50 na 60 fotsiny dia sarotra ny mahafoy an'izany rehetra izany mba hampitomboana ny tahan'ny frame."
Eo an-dàlana ihany koa ny teknolojia DLSS an'ny DLDna. Tao amin'ny Computex 2021, AMD dia nanambara ny endriny manokana momba ny santionany nohatsaraina AI, izay antsoiny hoe FidelityFX Super Resolution (FSR). Hatramin'izao, tsy fantatra ny fiasan'ny FSR. Mahaliana fa ny FSR dia afaka mihazakazaka amin'ny Nvidia GPUs, na dia ireo izay tsy manohana ny DLSS an'i Nvidia aza.
Indrisy anefa, FSR dia mbola fampanantenana fotsiny amin'izao fotoana izaosatria tsy havoaka mandra-pahatongan'ny 22 Jona ary tsy mazava raha ho hita eo ho eo amin'ny Linux amin'ny andro fandefasana izy io.
“Izahay koa dia tsy manana be dia be momba ny kalitaon'ny sary araka ny tadiavinay. Raha tsy afaka mifaninana amin'ny DLSS ny FSR amin'ny resaka kalitao dia tsy maninona izany raha mihaona na mihoatra ny tahan'ny famelomana azy aza ny FSR, "hoy ny AMD.
Na dia nilaza aza i Nvidia fa ho tonga amin'ity volana ity ny fanohanan'i Vulkan ary ho tonga amin'ny fararano ny fanohanana DirectX, ny orinasa kosa dia tsy nanisy fe-potoana hanomezana ny DLSS ho any Proton. Saingy tsara ny mahita fa manohy manosika ny lalao Linux hiaina mifanaraka amin'ny traikefa Windows.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nvidia sy Valve dia mitondra DLSS, teknolojia mamela ny gamer hahazo fahombiazana bebe kokoa amin'ny Linux